Nagarik News - उद्दण्ड पारस, निर्धा पारस
१ कार्तिक, २०७१
सिकुटे ज्यान, शुष्क मुहार, जिङ्ग्रिङ्ग कपाल, हातमा हतकडी अनि ओठमा शिथिल मुस्कान!
लागुऔषधसहित पक्राउ परेको भन्दै थाइल्यान्डको खाई न्युज डट कमले सार्वजनिक गरेको तस्बिर नेपालका पूर्वयुवराज पारस शाहकै हो त?
कुनै जोगीको अखडामा लट्ठिएको गँजडीभन्दा फरक अवस्था थिएन उनको। पहिलो पटक तस्बिर देख्दा झट्ट पत्याइहाल्ने अवस्था थिएन। केही समयअघि थाइल्यान्डको विहारको विचरण गरिरहेको उनको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा आउँदा उनको शरीरको वजन घटेको देखिए पनि मुहारको चमक हराएको थिएन।
उनका केही शुभचिन्तकले तस्बिरमा भएका व्यक्ति पारस हुनै नसक्ने 'उनी त सुरज गञ्ज हुन्' भन्दै समाचारसमेत सम्प्रेषित गरे। तर, उनका शुभचिन्तकका सबै प्रयास मन बहलाउने साधनमात्रै भएको पुष्टि भयो। उनीहरूको प्रयासले कोकिन, आइस्ड ड्रग्स अनि गाँजा बोकेर हिँड्दा थाई प्रहरीको हिरासतमा पुगेका व्यक्तिको पहिचान फेरिएन। लागुऔषध ओसारपसारको अभियोगमा अनुसन्धानका लागि थाई प्रहरीले १२ दिन थुनामा राख्ने अनुमति पाएको व्यक्ति पारस नै थिए।
नेपालमा गणतन्त्रको उदयसँगै थाइल्यान्डमा बसाइँ सरेका पारस पक्राउ परेको यो पहिलो चोटि थिएन। सर्वसाधारणलाई सडकमा किचेर मार्दा होस् या डिस्कोमा गोली चलाउँदा होस्, यता नेपालमा सधैँ कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाउँदै आएका उनी उता थाइल्यान्डको बसाइमा यस्तै गरी पक्राउ परेकै संख्या चार पुग्यो।
लागुऔषधको लतले हृदयाघात भएर कालको मुखमा पुगे पनि जोगिएका उनी केही समय उतैको सुधारगृहमा समेत नबसेका हैनन्। आफ्नो जीवन सुधार्ने सबै प्रयासलाई असफल बनाउँदै उनी पुनः चौथो पटक पक्राउ परे।
पहिलो पटक पक्राउ परेका उनलाई थाइल्यान्डको अदालतले सुधारगृहमा बस्न आदेश दिएपछि उनी थाइल्यान्डको च्याङमाई सुधार केन्द्रमा उपचारका लागि पुगेका थिए। उनी सुधारगृहमा उपचार सकाएर सामान्य जीवनमा नफर्किएका पनि हैनन्। तर, लागुऔषधको लतले उनलाई सामान्य हुन दिएन।
गणतान्त्रिक नेपालको घोषणापछि निर्मल निवासमा बस्दै आएका पारस २०६७ साल भदौ ११ गते चुल्ठो हल्लाउँदै कालो कोट र कालै चस्मामा बाईबाई गर्दै त्रिभुवन विमानस्थलबाट नेपाल छाडेर सिंगापुर गएका थिए।
केही समय सिंगापुरमा बिताएका उनी नेपाल फर्कनुको साटो थाइल्यान्डतिर लागे। नेपालको तत्कालीन राजपरिवारसँग राम्रै सम्बन्ध रहेको थाई राजतन्त्रात्मक मुलुक भएकाले उनी सिंगापुरको साटो थाइल्यान्ड सरेको धेरैको अनुमान थियो।
उनी जब पहिलो पटक थाइल्यान्डको फुकेटमा गाँजासहित पक्राउ परे, बल्ल थाइल्यान्डमा पारसको बसाइको हैसियत सार्वजनिक भयो। २०६९ कात्तिक ७ मा फुकेटको एक होटलमा पुरुÈ र महिलाबीच झगडा चर्किएपछि होटल व्यवस्थापनले प्रहरी डाकेको थियो। झगडा भएको कोठामा प्रहरीले खोजतलाश गर्दा
उनको कोठामा ३.४ ग्राम गा"जा भेटिएपछि उनी पक्राउ परे।
गाँजा फेला परेपछि केही दिन प्रहरी हिरासतमा बिताएका उनी १० हजार भाटमा रिहा त भए तर अदालतले उनलाई सुधारगृहमा जान निर्देशन दियो। अदालतको निर्देशनअनुसार उनी केही महिना सुधारगृहमा बसेका थिए। उनको पासपोर्ट फुकेट कोर्टले राखेको थियो।
त्यसको दुई महिनापछि नै उनी पुनः होटल तोडफोड गरेको आरोपमा समातिए। सुखम्भितमा आफैँ बसेको होटलको कोठा तोडफोड गरेको आरोपमा समातिएका उनले होटल सञ्चालकलाई क्षतिपूर्ति तिरेर मुक्त भएका थिए।
यत्तिकैमा उनको पक्राउ क्रम रोकिएन। तेस्रो पटक उनी ११.७ ग्राम गा"जासहित बैंककको होटल डेभिसबाट पक्राउ परे। थाइल्यान्डमा गाँजा खानु अपराध भए पनि कडा कानुन भने छैन। गाँजाको कारोबार गरेको पुष्टि भएमात्र कारागारयात्रा हुन सक्छ। तेस्रो पटक गाँजासहित समातिएका उनको साथबाट बरामद भएको गाँजा उनले व्यक्तिगत प्रयोजनमा बोकेको खुलेपछि उनी ६५ हजार भाट धरौटी बुझाएर मुक्त भए। तर, सो मुद्दा अझै किनार लागेको छैन।
गत मंसिर २२ मा हृदयाघात भएर कोमामा पुगेका पारस करिब एक महिनाको प्रयासपछि ब्युँतेका थिए। दोस्रो जीवन पाएसँगै थाई युवती कन्निका चाइसानसँग बस्ने गरेका पारसले लागुऔषध त के चुरोटसम्म छाडेका समाचार छापिए। तर, ती सबै सन्देश उनका शुभचिन्तकले उनको छवि सुधार्न गरेका असफल ढाकछोपमात्र थिए।
दोस्रो मुद्दा किनार नलाग्दै पारस पुनः चौथो पटक पक्राउ परे, नोङ खाई प्रान्तमा। जानकारहरूका अनुसार उनी आफ्नी थाई प्रेमिका कन्निकालाई भेटेर फर्किने क्रममा पक्राउ परेका हुन्। पक्राउ परेको स्थल उनको प्रेमिकाको घरनजिकै छ।
यसअघिका पक्राउलाई थाई प्रहरीले गुपचुपै राख्ने प्रयास गर्दै आए पनि चौथो पक्राउमा भने यस्तो मौनता कायम रहेन। थाई प्रहरीले पारसलाई यसपालि पूर्ण आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिझैँ व्यवहार गर्दै पक्राउ गरेको स्थानमै हातमा हतकडी लगाएर तस्बिर खिँचायो। प्रहरी कार्यालयमा ल्याएर पत्रकार सम्मेलनमार्फत पारसको अवस्था सार्वजनिक गर्योस।
पक्राउ र सार्वजनिक गर्ने शैलीमात्रै हैन, पारसको चौथो पक्राउमा बरामद लागुऔषधको परिमाण र प्रकारसमेत फरक थियो। यस अगाडिको पक्राउमा पारस गाँजासहित पक्राउ पर्ने गरेकोमा चौथो पक्राउमा उनको साथमा कोकिन र एमफेथामाइन (आइस्ड ड्रग्स) फेला परेको थाई प्रहरीले सार्वजनिक गर्योउ।
लागुऔषधविरुद्ध कार्यान्वयनमा रहेको थाई कानुनमा गाँजा सेवनलाई कडाइका साथ नलिए पनि कोकिन र आइस्ड ड्रग्सविरुद्धका दफा भने कडा छन्। थाइल्यान्डमा प्राकृतिक र कृत्रिम लागुऔषध नियन्त्रणका लागि छुट्टाछुट्टै 'नार्कोटिक्स एक्ट' र 'साइकोट्रोपिक सब्सटेन्स एक्ट' सक्रिय छन्। जसमा हिरोइन, अफिम, कोकिनमा आजीवन कारावास र मृत्युदण्डसम्म सजाय हुन सक्छ।
कृत्रिम लागुऔषधको किनबेच, खरिद र प्रयोग नियन्त्रणका लागि त्यहाँ थप कडा प्रावधान छ। पारसको साथबाट फेला परेको एमफेथामाइन वर्गको आइस्ड ड्रग्स कृत्रिम लागुऔषध हो, जो पार्टी ड्रग्सको नामले समेत परिचित छ।
पटक–पटक एकै अभियोगमा पक्राउ पर्ने अभियुक्तमाथि कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया कठोर हुन्छ नै। त्यसमा पनि कडा कारबाहीको वर्गमा रहेका लागुऔषधसमेत बरामद भएकाले पारस यस अगाडिझँै सहजै धरौटीमा उम्किने सम्भावना न्यून देखिन्छ। उनलाई अदालतले अनुसन्धानका लागि १२ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिनुले समेत अदालतले उनको केसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिन्छ।
सन् १९७१ डिसेम्बर ३१ मा जन्मिएका पारस र विवादको सम्बन्ध थाइल्यान्डमा पुगेरमात्रै सुरु भएको हैन। नेपालमै शाहजादाको हैसियतमा हुँदा होस् या युवराज हुँदै पूर्वयुवराजको हैसियतमा पुग्दा होस्, विवाद र पारसको पटक–पटक पुर्नमिलन भइ नै रह्यो।
शाहजादाको हैसियतमै हुँदा फाट्टफुट्ट उनका चर्तिकला सर्वसाधारणमाझ आइपुग्थ्यो नै। तर, ती चर्चा किस्सामा सीमित थिए।
विसंं. २०५७ साउनपछि उनको चर्तिकला किस्सामा मात्रै समेटिएन। २०५७ साउन २२ गते गाडीले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा गायक प्रवीण गुरुङ मारिए। होटल याक एन्ड यतिबाट निस्किएको गाडीले नारायणहिटीको उत्तरी गेटअगाडि गुरुङको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएको थियो।
ठक्कर दिने गाडी महेन्द्र प्रकृति संरक्षण कोषको नाममा थियो। पारसका बाबु ज्ञानेन्द्र शाह कोषका संरक्षक थिए। गाडी त्यहा"बाट बत्तिँदै गएर महाराजगञ्जस्थित निर्मल निवासमा छिरेको थियो।
प्रारम्भमा सवारी दुर्घटना बनाउने प्रयास भए पनि पछि ठक्कर दिने चालक पारस भएको भन्दै विरोध प्रर्दशन सुरु भयो। नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले तत्कालीन शाहजादा पारसलाई कारबाहीको माग गर्दै दरबारमा हस्ताक्षर नै बुझाएको थियो। त्यसको नेतृत्व गरेका थिए, रवीन्द्र अधिकारी अनि रूपनारायण श्रेष्ठले।
गुरुङ प्रकरणले दरबारका नातेदारको विषयले पहिलो पटक संसद्मा प्रवेश पायो। संसद्ले घटनाको निन्दा गर्दै पारसमाथि कारबाहीको माग गरेपछि तत्कालीन गृहमन्त्री गोविन्दराज जोशी पारसलाई कारबाही गर्ने वचन दिन बाध्य भए। एकाएक गायक गुरुङलाई ठक्कर दिने गाडीको चालकका रूपमा खड्गबहादुर भुजेल सार्वजनिक भएपछि घटना त्यत्तिकै सेलायो। पारस जोगिए।
प्रवीण गुरुङलाई ठक्कर दिने गाडीका चालक भुजेल थिएनन्, पारसै थिए भन्नेमा बेला बलियो शंका थियो। दरबारकै तत्कालीन कर्मचारीले १० वर्षपछि भए पनि सो शंकाको पुष्टि गरिदिए। राजदरबारका तत्कालीन सैनिक सचिव विवेक शाहले 'मैले देखेको दरबार' पुस्तकमार्फत गायक गुरुङको हत्या पारसले नै गरेको र नक्कली चालक बनाएर पारसलाई जोगाएको उल्लेख गरेका छन्।
२०५८ मा नारायणहिटीमा भएको दरबार हत्याकाण्डमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसँगै उनीसमेत संशयमा तानिइरहे। हत्याकाण्डमा वीरेन्द्र शाहको वंश विनाश भएकाले ज्ञानेन्द्रले राजा हुने मौका पाए भने पारसले युवराज।
युवराज भएपछि पनि उनका उट्पट्याङ क्रियाकलाप रोकिएनन्। रक्सीको नशामा धूत पारसलाई लिन हिमानी शाह गएपछि रिसाएका उनले एभरेस्ट होटलभित्रै गोली चलाएर पुनः विवादमा आए। तर, घटना गुपचुपै रह्यो।
यत्तिमै रोकिएन, हिमानी–पारस लफडा। पारसले निर्मल निवासमा हिमानीलाई गोली हानेर घाइते बनाएको हल्ला डढेलोझँै सल्कियो। दुवैबीचको झगडाको क्रममा निर्मल निवासमा यो अप्रिय घटना भएको चर्चा चुलिएपछि हिमानी र पारस सार्वजनिक स्थानमा निस्कन बाध्य भएका थिए। हिमानी घाइते भएको चर्चा झुटो हो भन्ने पुष्टिका लागि पारस हिमानीलाई लिएर वसन्तपुर घुम्न आएका थिए भने नेपाल टेलिभिजन, एभिन्युजलगायत सञ्चारमाध्यमले त्यसको प्रत्यक्ष प्रसारण गरेका थिए।
राजतन्त्रको अन्त्यसँगै युवराजबाट पारसको हैसियत पनि पूर्वयुवराज भयो। केही समय उनी शान्तै बसे। तर, उनको शान्तिकाल लामो समय टिकेन।
डाङडुङमा नाम मुछिँदै आएका पारसको नाम जाली भारतीय रुपैयाँको कारोबारमा समेत मुछियो। २०६६ भदौमा भारत मध्यप्रदेशबाट नक्कली भारतीय रुपैयाँसहित नेपाली नागरिक अतिक मोहम्मद र भारतीय राजेश गुप्ता पक्राउ परे। लगत्तै बिक्की मनिहारको पक्राउपछि भारतीय मिडियाले पक्राउ परेकाहरूले प्रहरीलाई दिएको बयान उद्धृत गर्दै कारोबारमा युनुस अन्सारी र पूर्वयुवराज पारस शाहको समेत नाम जोडेका थिए।
जाली भारुको कारोबारमा भारतीय मिडियाले बोलेपछि उनले विज्ञप्ति निकालेर सफाइ दिनुपरेको थियो। युनुस जाली भारुको कारोबारको क्रममा पक्राउ परेर जेलमा छन्। तर, पारसमाथिको सो आरोप, आरोपभन्दा माथि उठेन।
पारसकी बहिनी प्रेरणा शाह र राजबहादुर सिंहबीच विवाह भए पनि सम्बन्ध सुमधुर थिएन। बहिनीज्वाइँ सिंह बाहिर रासलीला गर्दै हिँड्ने र बहिनीलाई वास्ता नगर्ने गरेकोमा क्रुद्ध पारसले आखिर रिस थाम्न सकेनन् र बहिनीज्वाइँलाई कुटे।
राजबहादुर सिंह रोयल क्यासिनोको शेयर किनेर मालिक भएका थिए। उनी क्यासिनोमै भएको बेला एकाएक पारस क्यासिनोमा आएर आफ्नै ज्वाइँलाई कुटेका थिए। करिब १५ मिनेट क्यासिनोमा हंगामा मच्याएर उनी बाहिरिएका थिए। घटना सार्वजनिक भएसँगै पारस विवादमा तानिएपछि उनका ज्वाइँ राजबहादुरले विज्ञप्ति निकालेर केही नभएको भन्दै जेठानको बचाउ गरेका थिए।
चितवनको टाइगर टप्स रिसोर्टमा कोइराला परिवारका ज्वाइँ बंगलादेशी नागरिक रुवेल चौधरीसँग उनको लफडा भयो। टाइगर टप्समा दुवैबीच भएको जम्काभेट विवाद हुँदै हवाई फायरसम्म पुग्यो। आफ्नो ज्वाइँलाई ताकेर गोली हानेको भन्दै तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाले कारबाहीको माग गरेपछि सरकार अन्य घटनामाझँै मौन बस्न सकेन।
२०६७ फागुन २८ गते पोखराको फूलबारी होटलमा प्रहरीले पारसलाई नियन्त्रणमा लियो। उनीविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनमा सार्वजनिक अपराधको मुद्दा नै चल्यो। कानुनी प्रक्रियाबीच चितवनका सीडीओले पारसलाई अब यस्तो नगर्ने चेतावनी दिँदै छाडे।
पारस थाइल्यान्डमै असुरक्षित रहेको दाबी सार्वजनिक नभएका हैनन्। उनको नाममा थाइल्यान्डमा रहेको नेपाली दूतावासमा निवेदनसमेत परेको थियो। तर, को बाट किन पारस असुरक्षित थिए? त्यो कसैले खुलाउन सकेनन्। अहिले पनि उनका शुभचिन्तकहरू उनी थाइल्यान्डमा असुरक्षित रहेको दाबी गरिरहन्छन्।
हृदयाघातको सफल उपचारसँगै पारस नेपाल फर्कने चर्चा सुरु भएको थियो। तर, उनी फर्किएनन्। चार वर्Èको भिसाअवधि सकिएलगत्तै उनी नेपाल फर्कने पुनः चर्चा भयो। तर, गत साउन २१ मा भिसा थप गरेर उतै बसे। चौथो पटक पक्राउपछि फेरि उनलाई नेपाल ल्याउने चर्चा सुरु भएको छ। यसका लागि नेपालबाट पूर्वराजपरिवारका सदस्यहरूको एक टोली थाइल्यान्ड जाँदै छ। तर, उनको नेपाल आगमन न उनको इच्छामा अड्किएको छ, न उनको आफन्तको चाहनामा। अदालतबाट मुद्दा अन्तिम किनारा नलाएसम्म उनको 'मिसन नेपाल' असम्भव छ।
थारु युवती बन्दै मलिना
फिल्म ‘झुम्की’की मुख्य हिरोइनका रूपमा पूर्व मिस नेपाल मलिना जोशीलाई लिइएको छ। फिल्म युनिटले ‘झुम्की’को सुटिङको मिति नजिकिँदै गर्दा मुख्य हिरोइनको नाम सार्वजनिक गरेको हो।
सुजन र दीपा निम्स आइडल
नेपाल इन्स्टिच्युट अफ म्यानेजमेन्ट एन्ड साइन्स (निम्स) कलेजको आयोजनामा भएको मिस्टर निम्स आइडल सुजन आचार्य र मिस निम्स आइडल दीपा कठेत भएका छन्।
हलिउड सपनाका पछिपछि
नेपालमा सफल कलाकारका लागि बलिउड सपनाको अर्को केन्द्रबिन्दु हो। हलिउडको सपना भने नेपाली कलाकारले त्यति देख्दैनन्। तर, भर्खरै १५ वर्ष टेकेकी आश्मा गिरीको सपना, लक्ष्य र भविष्य जे भने पनि...
पुनर्निमार्णको 'मोडालिटी' प्रस्ट हुनुपर्छ
महाभैँचालो गएको एक महिना बितिसक्दा पनि जनजीवन सामान्यतर्फ उन्मुख हुन सकिरहेको छैन। वैशाख १२ गतेको ठूलो भूकम्प र त्यसपछि निरन्तर गइरहेका पराकम्पनले जनजीवनलाई बिथोलिरहेको छ। महाभैँचालोले करिब नौ हजार व्यक्तिको...
अचेल नेपालमा ९० प्रतिशतजति फिल्म फ्लप हुन्छन्। न त कलात्मक रूपमा तारिफयोग्य फिल्म नै बनेका छन्। तैपनि फिल्म र कलाकारहरूले देशभित्र धमाधम अवार्ड पाइरहेकै छन्। महिना दिन बिराएर हुने फिल्म...